Vula uhlelo lwesitezi, sesimanje, isabelomali esinobungane e-Lincoln ngu-Luxury Savannah - I-Airbnb
Vula uhlelo lwesitezi, sesimanje, isabelomali esinobungane e-Lincoln ngu-Luxury Savannah
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Lucky Savannah
U-90% wezivakashi zakamuva unikeze u-Lucky Savannah izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Leli khaya elimangalisayo elinekamelo lokulala elilodwa linendawo evulekile ehlukile yokuhlela kuyo yonke indlu. Ikhishi negumbi lokugezela elilungiswe kahle liqedela ukubukeka kwesimanjemanje kwale ndawo enhle. Ngekhishi elikhulu elivulekile negumbi lokuphumula uzoba nendawo evulekile yokuphumula!
Ukugcinwa kabusha kwendlu okuthuthukisiwe: i-COVID-19: Impilo nokuphepha kwabanikazi bethu, izivakashi nezisebenzi kubaluleke kakhulu kithi. Sithatha izinyathelo ezengeziwe zokuphepha nezinyathelo zokuqinisekisa ukuthi zonke izidingo zokuhlanzeka kwendlu kanye nokuhlanzeka kwendlu yangaphakathi azihlangatshezwana nje kuphela, kodwa zidlulele, ukuqinisekisa indawo enhlanzekile. Izinyathelo ezithile ezithuthukisiwe ezithathiwe zihlanganisa imikhiqizo eyengeziwe yokuhlanza okubulala amagciwane kwezentengiselwano, abasebenzi abagqoke ukuvikelwa kobuso namagilavu lapho besemakhaya, ukuhlanza okujulile okuvame kakhulu, nokuqhubeka kwezinsizakalo zethu zokuhlanza izingubo zokwamukela izivakashi.
Leli kamelo lokulala elilodwa, ikhaya elilodwa lokugeza e-Savannah 's Victorian District liyindawo ekahle kakhulu yokuphunyuka ekuphileni kwansuku zonke. Kokubili okuyingqayizivele nokuhlaba umxhwele, leli khaya linezincwadi eziphansi kuya kusilingi ezakhelwe emnyango wangaphambili, itafula lekhofi lamatshe, nekhishi lezimboni elinendawo yokudlela isidlo sasekuseni.
Uhlelo olukhulu lwendawo evulekile luthola ukukhanya kwemvelo okwanele eminyango yengilazi esilayidayo, eholela endaweni encane yangaphandle efanelekela ukugcina amabhayisekili. Ikamelo lokulala linombhede omkhulu, i-TV enkulu eyisikrini, namakhethini obumfihlo. Indlu yokugezela isanda kulungiswa futhi inobhavu neshawa enkulu, evulekile. I-walk-in closet inendawo evulekile yokuthi uyikhiphe, futhi umnyango wasepokothweni unikeza ubumfihlo obengeziwe ku-latrine.
Njengoba ungena, ngokushesha ngakwesokudla sakho yindawo yokulala eneloft, futhi ngale kwalokho yindawo encane yokudlela yangasese efanelekela isidlo sakusihlwa sothando. Ngale kwalokho yindlu yokugezela enkulu. Isanda kulungiswa ngezinto ezivelele, inobhavu, ishawa ezimele ehlukile kanye ne-canity enhle. Leli khaya eliyingqayizivele akufanele liphuthelwe! I-Forsyth Park izoba yindawo yakho yokudlala, amabhuloho ambalwa nje kude, futhi ikhaya lisesitaladini elinomzila webhayisikili ukuze ukwazi ukutshuza phansi ku-River Street noma eMakethe yeDolobha ngemizuzu embalwa nje.
Thatha ikhofi ku-Sentient Bean ngaphambi kokuhamba ngezinyawo ekuseni e-Forsyth Park, indawo enkulu kunazo zonke ye-Savannah eluhlaza nendawo ethandwayo yemishado, umculo nemikhosi yokudla.
Kungani u-Luxury Savannah ethanda le Ndlu:
- Kunenqwaba yendawo yokupaka engenawo amamitha endaweni eseduze.
- Leli khaya eliyingqayizivele liyikhaya eliphelele lomuntu osebenza nge-intanethi.
- Sebenzisa umzila webhayisikili womgwaqo ukuze uye phansi ku-River Street noma eMakethe yeDolobha ngemizuzu embalwa nje.
engenawo amamitha Le ndawo inendawo yokupaka yamahhala, esesitaladini ngaphandle nje komnyango wangaphambili. Ukutholakala kuzoncika esikhathini sosuku nenkathi yonyaka. Izivakashi zethu azizange zibike inkinga yokupaka eduze nekhaya, ngisho nasezimpelasonto ezimatasa kakhulu.
Ikamelo 1: Umbhede Omkhulu
4.31 · 13 okushiwo abanye
Ibungazwe ngu-Lucky Savannah